Adeegyada caafimaadka dhimirka | Suomen Mielenterveysseura
Xaaladda adag ee nolosha
Xarumaha arrimaha dhibaatooyinka
Adeegyada caafimaadka dhimirka
Helida kaalmada dhimirka ee dhalinyarada
Helidda daryeelka caafimaadka dhimirka ee ilmaha
Ka welwelka qoyska ama qaraabada
Qofka ku jira baxnaanada dhimirka dhaqaalahiisa
Qoyska ama qaraabada ayaa laga helay dhimirka
Waajibaadka qarinta sirta ee shaqaalahacaafimaadka iyo arrimaha bulshadda
Dhalinyarada iyo dhibaatada
Dhibaatada xaaladda nolosha
Dhibaato masiibo ah
Goorma ayuu ilmaha ama dhalinyarada dhibaateysan ubaahanyahay kaalmo xirfadle?
Ilmaha iyo dhibaatada
Waan ka walwalsanahay xigaaladeyda
Cabsida dadka soo wajahda
Hab dhaqan qasan
Malaha khiyaaliga ah ee waayeelka
Marka ay murugadu dheeraato
Niyadjabsanaan iyo firifircoonaan siyaada ah oo isbedbedela
Shaqo ku daalis
Xanuunka dhimirka iyo isticmaalka muqaadaraadka oo wadajira
Daan-daansiga (bahdilka) iskuulka
Daan-daansiga (bahdilka) shaqada
Kala tagga lamaanaha
Usoo guuridda wadan kale (soo haajirid)
Astaamaha xanuunka isxakameyn la'aanta
Baqdin ka qabka bulshada
Cuqdadaha iyo baqdimaha xaddhaafka ah
Dawooyinka daryeelka xanuunka dhimirka
Hababka daryeelka ee teraabiyada cilminafsiga
Kurbada guud ahaaneed
U sheegidda xigaalada ee xanuunka dhimirka
Xanuunka labamiyirlenimada ee dhimirka
Finland helitaanka adeega caafimaadka dhimirka waxaa masuul ka ah deegaanada. Adeega caafimaadka dhimirka deegaanada mooyee waxaa kale oo bixiya waaxyaha caafimaadka deegaanka, adeega caafimaadka sida qaaska ah loo leeyahay sidoo kale hay’adaha madaxa banaan sida ururada. Adeega caafimaadka dhimirka sidoo kale waxaa bixiya tusaale xarunta caafimaadka, waaxda caafimaadka shaqaalaha, waaxda caafimaadka khaaska ah ee dhimirka, xarumaha caafimaadka sida qaaska ah loo leeyahay, meelaha gaarka ah ee caafimaadka dhimirka, kaniisada ama ururada, kuwaas oo abaabula ama gacanta ku haya adeegyo badan oo la xiriira caafimaadka dhimirka.
Hirgalinta adeega caafimaadka dhimirka ee deegaanada kala duwan faraq weyn ayaa u dhexeeya. Deegaanada waaweyn adeegan waa mid noocyo badan leh, sidoo kale meelo badan ayaa laga heli karaa (fiiri tusaale adeegyada caafimaadka dhimirka ee deegaanada: Espoo, Helsinki, Tampere, Oulu).
Daryeelka dibeda iyo midka isbitaalka
Caadi ahaan sida wax looga qabto dhimirka waa isku-dhaf ka kooban wada-haddal iyo daaweyn sidoo kale waxaa iman kara in si koox-koox ah loo abaabul loona sameeyo hawlo la qabanayo si wadajir ah sida wax la sawirayo ama ku daryeela muusikada. Dhimirka daran ama waqtiga dheer socdey daryeelkiisu waa mid ku dhisan qaabka ku daaweynta qofka dibeda isagoon isbitaal la seexineyn, qofku goobta caafimaadka wuxuu u tagayaa oo kaliya inuu helo daryeel xiliyo cayiman sida todobaadkii ama bishii. Caafimaadka dibeda waxaa laga heli karaa iyadoo kolba baahidda qofka iyo deegaanka ay ku xirantahay adeeg kaalmeyn kala duwan sida hoyi qofka lagu ogaanayo iyo baxnaanin ama hawl-galin maalintii. Tusaale Helsinki adeega maalintii waxaa bixiya sida Niemikotisäätiö.
Adeega maalinlaha ah muhiimadiisu waa in kor loogu soo qaado tayadda nolosha qofka ka soo kabanaya dhimirka sidoo kale in la xoojiyo inuu qofku iskuu wax u qabsado. Adeegaas maalinlaha ah badanaa waxaa qeyb ka ah tusaale suurtagalnimo cunto karin, in qofku uu hiwaayad aado, in la aado safar gaaban iyo suurtogalnimo in qofku la hadlo ama la sheekeysto dadka kale ee dhimirka ka soo kabanaya ama shaqaalaha hawsha abaabulaya.
Haddii adeega daryeelka dhimirka dibedda aysan ku fileyn qofka, bukaanka waxaa loo dirayaa isbitaalka caafimaadka dhimirka, qeynta jiifka kadib marka la qiimeeyo baahida jirta. Badanaa isbitaalka qeybtiisa jiifka si fudud wax looguma gudbiyo.
Codsashadda adeegyada caafimaadka dhimirka ee xarunta caafimaadka ama xarunta caafimaadka shaqaalaha
Haddii aad u maleyso inaad u baahantahay kaalmada caafimaadka dhimirka, waxaa haboon inaad ka bilowdo xarunta caafimaadka ama xaruntaada caafimaadka shaqaalaha. Waxay ku xiran tahay kolba heshiiska shaqo bixiyahaagu la galay xarunta caafimaadka shaqaalaha sida ay tahay heerka adeegyada caafimaadka dhimirka ee halkaas laga heli karo ama loo mari karo. Haddii goobtaadda shaqadu aysan bixineynin tusaale kharashka caafimaadka dhimirka, waxaad takhtarka caafimaadka shaqada ka heli kartaa inuu kuu gudbiyo waaxda caafimaadka deegaanka ee bixiya daryeel la mid ah midka qofku u baahanyahay.
Ardeyda jaamacaddu intii ay aadi lahaayeen xarunta caafimaadka waxay aadayaan Rugta daryeelka caafimaadka ardeyda adeegyada ay bixiyaan. Macadyadda kale ardeyda dhigata waxa soo gudbinaya kal-kaaliyaha caafimaadka iskoolka, waxayna aadayaan takhtarka iskoolka ama xarunta caafimaadka deegaanka.
Sida daryeelku u soconayo marka aad ka codsato xarunta caafimaadka
Baahida daryeelka waxaa marka hore qiimeynaya takhtarka caafimaadka aasaasiga ee xarunta caafimaadka. Wuxuu qofka u dirayaa xarunta caafimaadka dhimirka takhtarka cudurada dhimirka. Deegaanada qaarkood waaxdan waxaa loogu yeeri karaa magac kale sida xarunta cudurada dhimirka, waaxda dhimirka ama xafiiska dhimirka.
Meelaha qaar qofku si toos ah ayuu balan uga sameysan karaa qeybta caafimaadka dhimirka, laakiin badanaa waxaa loo baahanyahay in qofka ay soo direen xarunta caafimaadka deegaanka ama xarunta caafimaadka shaqaalaha. Deegaanada xarumahooda caafimaadka qaar waxay leeyihiin kal-kaaliye caafimaad oo qaabilsan cudurada dhimirka qofkana u fidin kara latalin iyo talooyin.
Haddii caafimaadka aasaasiga ah uu kuu soo gudbiyo xarunta caafimaadka qaaska ah sida tan dhimirka ama kuwa la midka ah ee kale waxaad fursad u heleysaa iyadoo kolba ay ku xirantahay xaaladda inaad wada haddal la yeelato xirfadlayaal aqoon u leh dhimirka, arrimaha bulshadda ama kal-kaaliyaha dhimirka. Wada haddalka waxaa kuu dheeraan kara tusaale daryeel khaqsi, mid qoyska ama mid taraabiya koox loo qabanayo, daryeel daaweyn ama baxnaanin sida taraabiyada ficil sameyn, muusikada ama jimicsiga.
Qeybta dhimirka inta badan ma awoodo in ay bixiso daryeel muddo dheer soconeysa oo xiriir ah. Sidaas awgeed dayeelka saykoolojiga dhimirka waa in qofku uu ka raadsado adeega ay bixiyaan caafimaadka sida khaaska ah loo leeyahay. Haddii takhtarka khaaska ah ama ku taqasusay arrimahan uu kuu qoro waraaq uu kuugu dirayo caafimaadka dhimirka, KELA, xafiiska caymiska ayaad ka heli kartaa caawimo dhaqaale oo la xiriirta baadhitaankaas. Sii akhri codsashada teraabiyada cilminafsiga.
Adeegga caafimaadka sida gaarka ah loo leeyahay
Qeybtan waxaa lagaga hadli doonaa caafimaadka sida qaaska ah loo leeyahay ee aan ahayn kuwa caafimaadka shaqaalaha ama ardeyda jaamacadaha. Qeynta caafimaadka shaqaalaha waxaa lagu soo qaadi doonaa marka laga hadlayo aadida daryeelka xarunta caafimaadka.
KELA (caymiska) ayaa bixinaya qaar ka mid ah kharashka ku baxaya adeega caafimaadka sida qaaska ah loo leeyahay. Haddaad rabto waxaad aadi kartaa takhtar ku taqasusay cudurada dhimirka oo madax banaan. Daryeelka dhimirka marka laga reebo tan saykoolojistaha waxaa laga heli karaa badanaa qeybta caafimaadka aasaasiga ah ee bulshadda. Latalinta saykoolojistaha dhimirka qofka ayaa inta badan ka raadsanaya takhtar madax banaan, isaga ayaana iska bixinaya wixii ku baxa.
Haddii takhtar taqasus leh uu qofka u diro latalinta saykoolojistaha dhimirka, waxaa suurogal ah in KELA laga codsado caawimo dhaqaale oo kharashkan la xiriira. Xataa haddii aad adigu rabto inaad iska wada bixiso wixii kharasha ah ee ku baxaya latalinta dhimirka, si aad u hesho mid tayadiisu sareyso waxaa muhiim ah inaad ka doorato Valvira kuwa ay ogolyihiin sidoo kale KELA-na ay bixineyso kharash ku baxa latalintooda. Sii akhri codsashada teraabiyada cilminafsiga.
Kaalmada iyo adeega ururada
Ururo badan ayaa bixiya adeeg caawimo ah. Adeegyada ururadu ay bixiyaan badanaa waxaa maal-galiya RAY adeegyadaas waa u lacag la’aan dadka ka faa’iideyta. Ururo badan hawlahooda waa laga qeyb-qaadan karaa tusaale si iskaa-wax-u-qabso ah adigoo kaalmeynaya ama wehel u noqonaya dadka kale.
Caawimadda ururadu ay bixiyaan waxaa ka mid ah kaalmada telefoonka, kaalmada internetka, kaalmada qofka si toos ah loogala hadlayo dhibaatada Xoogan ee markaas heeysata, caawin kale ama koorsooyin baxnaanin.
Arrimaha caafimaadka dhimirka waxaa tusaale kaalmo laga heli karaa ururada so socda
Ururka Caafimaadka dhimirka Finland SOS-xarunta
Xaruma dhibaayinka ee gobolada
Kaalmada adeegyada shabakadaha internetka
Shabakadda Tukinet waxaa laga heli kartaa kaalmo si shaqsi ah oo ay bixinayaan shaqaalaha xarumaha dhibaatooyinka ama dad mutadawiciin ah, waxaad ka qeybgali kartaa wadahaddalka internetka ee koox-kooxda ah, ama waxaad ka raadsan kartaa tafaasiisha aad u baahantahay shabakadda Tukunet dhexdeeda ama kaydkeeda. Tukinet waxaa gacanta ku haya Vammala-Huittisten Mielenterveysseura ry.
Halkan waxaa laga heli karaa shabakado kale oo adeegyo kaalmo ah bixiya
Telefoonka arrimaha dhibaatada
Telefoonka arimaha dhibaatada
Tetefoonka arrimaha dhibaatooyinka ee wadanka wuxuu bixiyaa adeeg wadahaddal oo loogu talo-galay dadka dhibaatooyinku ku yimaadaan iyo qaraabadoodda. Telefoonka waxaa ka jawaabaya shaqaalaha dhibaatooyinka ama dad mutadawiciin ah oo arrimahaas loo tababbarey. Telefoonkan arrimaha dhibaatooyinka wuxuu heegan kaga jiraa toban iyo todobo degmo oo wadankan ka tirsan.
Halkan waxaad ka heli kartaa telefoono kale oo kaalmo bixiya
Meelo abaabula adeegyo loogu talagalay dadka koox-kooxda ah
Ururka Caafimaadka dhimirka Finland (Suomen Mielenterveysseura)
Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliitto ry:n boggan waxaad ka heli kartaa ururka ka hawl-gala deegaankaaga
Mielenterveyden keskusliiton boggan waad ka heli kartaa meelaha abaabula caawimadda kooxaha ama dadka koox-kooxda ah.